फोर्थ फस्र्ट राइफल्सलाई इन्टर बटालियन भलिबलको उपाधि – Todaypokhara
१० माघ २०७५, बिहीबार १२:२२ 25/01/2019
भारतीय भूतपूर्व गोरखा सैनिक इन्टर बटालियन भलिबल प्रतियोगिताको उपाधि फोर्थ फस्र्ट गोरखा राइफल्सले जितेको छ ।
भारतीय राजदूतावास पेन्सन वितरण क्याम्प रामबजार पोखराको मैदानमा भएको फाइनल खेलमा थर्ड एट गोरखा राइफल्सलाई हराउँदै फोर्थ फस्र्ट गोरखा राइफल्सले उपाधि जितेको हो ।
बेष्ट अफ फाइभको आधारमा खेलाइएको फाइनलमा फोर्थ फस्र्ट गोरखा राइफल्सले थर्ड एटमाथि २५–१५, १८–२५, २५–१२, २४–२६ र १५–१२ को जित निकाल्दै उपाधि जितेको हो ।
विजेता फोर्थ फस्र्टले उपाधिसँगै नगद २५ हजार साथमा शिल्ड, ट्रफी र मेडल पुरस्कार हात पा¥यो । रामबजार पेन्सन वितरण क्याम्प प्रमुख कर्णेल प्रतिक शर्मा, मेजर डा. शिवप्रसाद सिंह र एसबीआई बैंक गण्डकी प्रदेश प्रमुख पुजनराज अर्यालले विजेता टोलीलाई नगद, शिल्ड ट्रफी र मेडल पुरस्कार वितरण गरे । एसबीआई बैंक गण्डकी प्रदेश शाखाले प्रथम पुरस्कारको प्रायोजन गरेको थियो ।
प्रतियोगिताको उपविजेता थर्ड एटले नगद १५ हजार र मेडल हात पा¥यो । रामबजार पेन्सन वितरण क्याम्प प्रमुख कर्णेल प्रतिक शर्मा, मेजर डा. शिवप्रसाद सिंह र एभरेष्ट बैंक गण्डकी प्रदेश शाखा प्रमुख राजु गौलीले उपविजेता टोलीलाई पुरस्कार वितरण गरे । एभरेष्ट बैंक गण्डकी प्रदेश शाखाले द्धितिय पुरस्कारको प्रायोजन गरेको थियो ।
यसअघि, सेमीफाइनलमा फोर्थ फस्र्टले फस्र्ट फोर्थ गोरखा राइफल्समाथि २५–१७ र २५–२० तथा थर्ड एटले ६४ (सिक्स्टी फोर) रेजिमेन्टमाथि २५–१९ र २५–२० को जित निकाल्दै फाइनल पुगेको थियो । सेमीफाइनल चरणसम्म बेष्ट अफ थ्रीका आधारमा खेल खेलाइएको थियो ।
भारतीय राजदूतावास पेन्सन वितरण क्याम्प रामबजार पोखरा र भारतीय भूतपूर्व गोरखा सैनिक खेलाडी मन्च, पश्चिमाञ्चल पोखराले भलिबल प्रतियोगिताको संयुक्त आयोजना गरेको हो । मन्चका अध्यक्ष क्या.प्रेमप्रसाद गुरुङको संयोजकत्वमा प्रतियोगिता संचालन भएको हो । आइतबारदेखि शुरु प्रतियोगितामा १७ टिमको सहभागिता थियो ।